🥇 ▷ Batariga Apple Watch waa la bedeli karaa ✅
Batariga Apple Watch waa la bedeli karaa
Batroolka madax-bannaanida Apple Watch wali shaki weyn ayaa laga qabaa
Kadib markii si rasmi ah loo soo saaray barnaamijka cusub ee Apple Watch ee dhacdo guga hore ee guga, jahwareer ayaa hadda soo baxay oo ku saabsan madaxbanaanida warshada cusub ee shirkadda Californian. In kasta oo Apple Waxaad hore u daabacday macluumaadka nolosha dhabta ah ee batteriga, haddana weli qaar baa jira shakiga ku saabsan madax-bannaanida saacadda cusub ee Apple.
Apple waxay xaqiijineysaa in la bedeli karo Apple Watch
Xaqiiqda ah in aaladda cusub ee Apple ay tahay in lagu shito sidaa darteed badanaa waxay ka dhigeysaa wax kabadan hal feker waa maxay nolosha batteriga ee Apple Watch tanna waxay ka hadashay af-hayeen u hadlay shirkadda California oo xaqiijineysa in batteriga Apple Watch laga yaabo inay beddelaan farsamayaqaanada shirkadda ee si toos ah dukaannada Apple Store.
In kasta oo wareegga nolosha ee batteriga ee Apple Watch waxay ahaataa 3 sano jirSi kastaba ha noqotee, waxaa jira dhibaato kale oo suurtagal ah oo diidmo oo la xiriirta processor-ka. Ma cadda haddii Apple ay sidoo kale siin doonto dadka isticmaala suurtagalnimada beddelka CPU iyo RAM ee aaladda cusub. Si kastaba ha noqotee, waxaa suurtagal ah in Apple ay soo bandhigi karaan noocyo ka mid ah hagaajinta oo keliya milkiilayaasha aaladda sida moodelka Ilaalinta iyo Daabacaadda.
Intaa waxaa dheer, ku soo noqoshada mowduuca ugu weyn ee la xiriira bedelka batteriga, afhayeenka Apple ma uusan bixin macluumaad gaar ah, inkasta oo ay u muuqato taas farsamoyaqaannada laga heli karo dukaamada Apple Store waxay si toos ah u beddeli karaan batteriga Apple Watch dukaanka dhexdiisa iyo iyada oo aan loo soo dirin badeecada adeegga caawinta farsamada ee shirkadda Kalifoorniya.
Apple Watch si fudud looma furi karo
Tani waxay sidoo kale xaqiijin kartaa xaqiiqda in Apple Watch si fudud looma furi karo iyo in aaladdaani aysan la jaan qaadi karin baytariyada caadiga ah ee saacadaha kale ay si caadi ah u isticmaalaan, maadaama qalabkan cusub uu isticmaalo batari ku shaqeeya soo-kabashada.
Sida iska cad, hadda wax macluumaad ah oo ku saabsan Qiimaha ay leeyihiin batteriga cusub ee Apple Watch iyo waxa ay ku kici doonto in lagu beddelo dukaanka rasmiga ah ee Apple. Dabcan, moodalka Apple Watch 48mm wuxuu lahaan doonaa madax-bannaani waxyar ka weyn qaabka 32mm.